सहकारीमा धर्ना दिँदै सदस्यहरू !
मंसिर १३, २०६८ अर्थात नोभेम्बर २९, २०११
हिजो अफिसमा केही घण्टा बसे । अफिसका महिला कर्मचारीको परीक्षाका कारण बिदा लिए र बाहिर जाने प्रक्रिया ’bout जानकारी गराएपछि हिसाबकिताब गरिदिए । अहिले त्यो पद खाली नै छ । पत्रिकाको कार्यालय नजिकैको सुकुन्दा सहकारीमा सदस्यका रकम दिएनन् भनेर धर्ना बसेका छन.् । सदस्यका अनुसार आफ्नै पैसा लिन आउँदा समेत रकम नदिएकोमा आक्रोसित छन् । सञ्चालक सम्पर्कविहिन भयो भन्ने आरोप छ । आज पोखराबाट काशी जोशी आउनुभयो । तुलसी आँटीको उपचार असफल भएपछि भेटघाटको लागि आउनुभएको हो । यता फेसबुकबाट दुई अपरिचित अनुसारसँग प्रत्यक्ष कुराकानीको मौका मिल्यो । अनि आज होस्टेलकी बहिनीको आत्मिय मित्र परदेशबाट आइपुगे । हामीलाई परिचित गराए ।
This entry was posted on नोभेम्बर 29, 2011 at 5:53 अपराह्न and is filed under दैनिकी, म र मेरो कुरा. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.